Atụmatụ 5 iji mee ka ịghaghachi azụ ahịa ụlọ akwụkwọ na 2019 | Martech Zone
Atụmatụ 5 iji mee ka ịghaghachi azụ ahịa ụlọ akwụkwọ na 2019
Monday, August 5, 2019 Monday, August 5, 2019 Douglas Karr
Back-to-School bụ nke abụọ nnukwu oge ịzụ ahịa n'afọ na ụwa dijitalụ abụrụla akụkụ dị mkpa nke ụzọ ndị ahịa na-azụ.
Laghachi na mmefu ụlọ akwụkwọ
Afọ a, nke NRF na-eme atụmatụ ịlaghachi mahadum imefu naanị ga-aza ajụjụ maka ịtụnanya $ 54.5 ijeri.
Tinyere mmefu k-12, ịzụ ahịa ụlọ akwụkwọ ruru ihe ruru ijeri $ 80.7, gbadata site na ijeri $ 82.8 n'afọ gara aga.
Na 2018, 23 pasent nke mmefu ụlọ akwụkwọ mere na ntanetị. Afọ a, Pasent 29 nke ịzụ ahịa ụlọ akwụkwọ ga-adị n'ịntanetị.
Na 2018, ndị na-azụ azụ n'ụlọ akwụkwọ k-12 nọrọ ihe dị ka $ 685 maka ezinụlọ ọ bụla n'ihe metụtara ụlọ akwụkwọ… na-atụ anya na ego ahụ mmụba ruo $ 696.70 mmefu ụlọ akwụkwọ maka ezinụlọ ọ bụla.
Mmefu nke ụlọ akwụkwọ kọleji gbakwunyere $ 280 ọzọ kwa ezinụlọ maka mkpokọta $ 976.78 na mmefu metụtara kọleji kwa ezinụlọ.
Dabere na Deloitte, Pasent 57 nke mmefu ego ụlọ akwụkwọ k-12 nọ na ụlọ ahịa na ntanetị afọ gara aga. N'afọ a, ọnụọgụ ahụ ruru ihe dịka otu, na pasent 56.
Ọ bụ ezie na ndị nne na-azụ ahịa karịa, ndị nna na- emefu $ 115 karịa na ụlọ akwụkwọ ụlọ ahịa.
Ihe omuma a sitere na shelf, Ọnụọgụ niile ị chọrọ iji maa ọkwa Mgbasa Ozi Backlọ Akwụkwọ, na-ekpughe atụmatụ 5 nke ndị na-ere ahịa nwere ike ị nweta nnukwu azụmaahịa ụlọ akwụkwọ:
Ndị nne na nna na-ese oge na-adabere na mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ịzụta mkpebi, yabụ kpachara anya hazie na oge ụfọdụ onyinye dị ukwuu.
Chee echiche banyere ịgba ọsọ a Amalite ohuru Mgbasa ozi iji banye na mmetụta ndị nne na nna na-eche banyere ụmụ ha na-amalite n'ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ma ọ bụ kọleji.
Jụọ ndị na-akwado akara na ndị na-eme ihe ike iji tinye ngwaahịa gị na post ha na-arụ ọrụ na ya.
Onye Mmekọ na Mama Bloggers iji nyere gị aka iru n’ihu ndị na - azụ ahịa ma nye gị ọdịnaya ndị eji eme ihe.
Ndị nne na nna nwere ọtụtụ ụmụaka na-achọkarị ụzọ iji chekwaa, yabụ jikọọ ngwaahịa gị ma chịkọta ihe ị zubere n'ime nchịkọta ọnụ.
Nke a bụ ozi info zuru oke na ụfọdụ data ọhụụ dị ịtụnanya maka ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ e-commerce:
Tags: 2019laghachi mahadumlaghachi n'ụlọ akwụkwọlaghachi azụ ahịaahia ulo akwukwoụlọ akwụkwọ na-azụ ahịammefu ụlọ akwụkwọtụọ n'ime
Ntuziaka 20 maka Trakwọ ụgbọ okporo ụzọ dị mkpa na ahia gị na-egosi ụlọ ntu